तुलसीको खेतीमा ४० हजार लगानी गर्दा तीन महिनामा नै ६ लाख आम्दामी तर कसरि ? – Krazy NepaL
तुलसीको खेतीमा ४० हजार लगानी गर्दा तीन महिनामा नै ६ लाख आम्दामी तर कसरि ?
November 6, 2020 515
काठमाण्डौ । कम समय र कम लगानीमा राम्रो आम्दानीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने मेडिसनल प्लान्ट(औषधीय गुण भएका वनस्पति)को खेती तथा व्यापार निकै लाभदायक हुन्छ । यस प्लान्टको खेतीको लागि कुनै ठूलो फर्मको आवश्यकता पर्छ, न त ठूलो लगानी नै आवश्यक पर्छ । यी वनस्पतिहरुको खेती तपाईले भाडामा जमीन लिएर पनि गर्न सक्नुुहुन्छ । अधिकांश औषधी जन्य वनस्पति ३ देखि ६ महिनाभित्र तयार हुन्छ । यसपछि यी वनस्पतिबाट लगातार आम्दानी हुुन्छ ।यदि तपाईले तुलसीको खेती गर्नुहुन्छ भने २० देखि ४० हजारसम्मको लगानीमा तपाईले केबल ३ महिनामा ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नुुहुन्छ ।
तुलसी ३ महिनामा तयार हुन। तुलसीलाई हिन्दूहरुले विशेष गरी धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ । तुलसीको पूजा गर्नु, मानिस मरे लगत्तै तुलसीको मोठमा लगेर शवलाई राख्नु लगायतले समेत यो वनस्पति कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ । धार्मिक मान्यता अनुसार तुलसीको जति महत्व छ, यसको औषधीय गुणका कारण बजारमा अझ ठूलो महत्व र डिमाण्ड छ । लामो समयदेखि धेरै औषधि उद्योगहरुले तुलसीबाट उत्पादन हुने तेललाई विभिन्न औषधीहरुको निर्माणमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तुलसीको खेती चैत वा बैशाखबाट सुरु गर्न सकिन्छ ।
रो’ग तथा किराहरुको कम आक्रमण हुने भनी पहिचान भएको तुलसीको प्रजातिको खेती गर्न सकियो भने अझ बढी फाइदा हुन्छ । थोरै खर्च र छोटो अवधिमा तुलसीको खेतीबाट धेरै राम्रो आम्दानी हुने जानकार बताउँछन् । तुलसीको खेतीबाट दुुई प्रकारका उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहिलो बिउ र दोश्रो पात । यसको बिज उत्पादन गरेर समेत बिक्री गर्न सकिन्छ भने पातबाट तेल नि’कालेर राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ । एक हेक्टर क्षेत्रफलबाट लगभग १२० देखि १५० किलोग्रामसम्म तुलसीको बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।राम्रो बाली छ भने एक हेक्टर क्षेत्रफलबाट १७० देखि २ सय किलोग्रामसम्म पातबाट तेल नि’काल्न सकिन्छ ।
तुलसीको बिउ प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ । यस्तै, तेलको मूल्य अहिलेको समयमा प्रति किलोग्राम १३ सयसम्म रहेको छ । यदि थोरै मात्र आम्दानी भयो भने पनि एक हेक्टरबाट ३ महिनाममा ४ देखि ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ । चीन पछि भारत दोश्रो देश हो, जहाँ जडीबुटीको बिषयमा निधै धेरै रिसर्च हुन्छ । यहाँको बजार समेत ठूलो छ । छिमेकी देशको यो बजारलाई टार्गेट गरेर औषधी जन्य वनस्पतिहरुको खेती गर्न सक्यो भने अझ बडी फाइदा लिन सकिन्छ । नेपालको औषधी उद्योगहरुलाई आपूर्ति गर्ने हिसाबले समेत तुलसी लगायतका औषधीय जन्य वनस्पतिहरुको खेती गर्न सकिन्छ ।
तुलसीजस्ता अन्य वनस्पतिहरुको समेत उच्च माग रहेको छ । जस्तो, आर्टिमिशिया एन्नुुआको पनि उच्च डिमाण्ड छ, यो वनस्पतिबाट चाहि मलेरियाको औषधि बनाइन्छ । यो यस्तो मे’डिकल प्लान्ट हो जुन भारत र चीन बाहेक नेपालमा समेत पाइन्छ । यस बाहेक अन्य मेडिसिनल प्लान्ट जस्तै, अश्वगन्धा, एलोभेरा, बेसार लगायतको समेत खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।
Prevबुढानिलकण्ठको दर्शन गरि कार्तिक २१ गते/Nov-6 शुक्रबार तपाइँको भाग्य कस्तो छ ? राशिफल हेर्नुहोस्
Nextकहिल्यै अन्तरिक्षमा छुट्टी मनाउने सपना देख्नुभयाको छ ? अन्तरिक्ष मा एक लक्जरी होटल खोल्दै